Buza Endaweni: Sikuphi Isitolo Sekhofi Esikahle Kildare - IntoKildare
Amagugu Afihliwe, Ukuvakasha kokuqala, Ukudla nokuphuza, Izeluleko Zendawo
Ngabe udinga i-jolt ye-caffeine ukukugcina uqhubeka ngemuva kosuku olunzima esihlalweni? Noma mhlawumbe udinga ukubeka izinyawo zakho phezulu bese uncibilika ngemuva kokuthenga kosuku olukhulu ngaseKildare…
Noma ngabe yisiphi isizathu, zitholele inkomishi enkulu yekhofi kwesinye sezitolo zekhofi ezinhle kakhulu esifundeni, esihlanganiswe ngabafundi be-InKildare.ie.
I-Burtown House & Gardens, i-Athy
Okuthunyelwe okwabiwe yi-The Green Barn @ Burtown House (@burtown_house)
I-Green Barn iyindawo ekahle yokuthola ikhofi. Ngenkathi ulapho, kungani ungazulazuli ezivandeni ezihlaba umxhwele ze-Burtown House noma mhlawumbe ubheke imenyu ye-brunch engenakuvinjwa.
Okuthunyelwe okwabiwe nguFIRECASTLE (@firecastle_kildare)
I-Firecastle e-Kildare inikeza ukukhetha okumnandi kwekhofi kusukela ekuseni kuze kube ntambama. Amakhekhe, ama-scones namakhekhe kumbalwa nje kwemenyu ebabazekayo, enezinto ezinhle kakhulu ze-brunch ezitholakalayo.
Okuthunyelwe okwabiwe nguRobert Mehigan (@r_mehigan)
Ama-swans on the Green anesimo semakethe esihle esimatasa, ngokukhethwa okuhle kakhulu kwezithelo nemifino, nokudla kwasemini endaweni yokudlela. Ngempela iyintandokazi yendawo ye-brunch.
Okuthunyelwe okwabiwe yi-Kalbarri Cookery School (@kalbarricookeryschool)
I-Kalbarri Cookery School usuku oluphelele lwekhofi lwempelasonto elise-Kilcullen. Isitolo sabo sokubhaka sivula njalo ngoMgqibelo kusukela ngo-9am-2pm okukunikeza izaba ezinhle zokuzama zonke izibiliboco zabo ezimangalisayo!
Okuthunyelwe okwabiwe nguSilken Thomas (@silkenthomaskildare)
I-Silken Thomas iyindawo yokudlela ephakathi kwedolobha lase-Kildare enokukhetha okuhle kwetiye nekhofi ongakhetha kukho. Ngokukhethwa kwezinketho zasekuseni ezinoshukela nezinambithekayo, uzolahlekelwa ukukhetha!
Indawo yokuphuzela ukudla yaseShoda Market
Okuthunyelwe okwabiwe yiShoda Market Café (@shodacafe)
ISoda Café yindawo yokudlela entsha kaKildare yokuphila, esekelwe kumqondo omusha futhi onempilo. Iziqu ezimbili ezedlule zeShannon College of Hotel Management zihlangane ndawonye zisebenzisa ulwazi lwabo olutholwe ngokusebenza emhlabeni wonke ngokungenisa izihambi ukusungula iShoda Market Café.
Amagugu AfihliweUkuvakasha kokuqalaUkudla nokuphuzaIzeluleko Zendawo
Eminye Imihlahlandlela Ongayithanda
Amavawusha esipho samaholide amahle ukuze ujabulele okungcono kakhulu kwe-Kildare
I-Ultimate Romantic Getaway eKildare
Letha Ukunambitha kwe-Kildare ekhishini lakho
Izinkundla Zamakhisimusi eKildare
Ukuphuka Komlingo KaKhisimusi emahhotela aseKildare
Itiye Lefestive Ntambama e-Kildare kulo Khisimuzi
Izindawo zokudlela ezihamba phambili eKildare zesizini kaKhisimusi
Amathiphu aphezulu ayi-5 wokuzuza kakhulu ku-Kildare Royal Canal Greenway Experience yakho
I-5 ethokomele kaKildare Firesides yokuvakashela lobu busika
Ochwepheshe be-craft ye-Kildare bebhiya newayini banikeza ukubhanqwa kwabo okuphezulu kukaKhisimusi
Ukuphunyuka Okukhulu (kwabantu abadala) ku-Co Kildare
Imibono Yezipho Zemikhosi evela e-Kildare
Hlala enqabeni eKildare
VOTE: Sikuphi isidlo sasekuseni esihle kakhulu sikaKildare
Amahora angama-48 eKildare - The Short Break Tourist
Izinto Eziphezulu Eziyishumi ongazenza Around Naas